Ithegi: UDan Zarrella | Martech Zone
Ithegi: UDan Zarrella
Izibalo eziya kukunceda ufumane i-Instagram Likes ezininzi kunye nokuLandela
NgoMgqibelo, Septemba 13, 2014 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uJenn Lisak wathetha noDave - okwabizwa ngokuba nguKewiki- malunga neendlela zonxibelelwano ezibonwayo kwi-Intanethi. Ukuba awulandelanga iKewiki… iakhawunti yakhe kufuneka ilandelwe. Usondele kwikota yesigidi sabalandeli kunye nomsebenzi omangalisayo wokubonwayo awubeka kwi-intanethi mihla le uyakuthatha umphefumlo wakho. UDave ngumzekelo omhle wendlela yokuzibandakanya kwi-Instagram! Imizamo yakhe yokuzibandakanya ikhokelele ekusebenzeni ngeenxa zonke
NgoMvulo, Meyi 14, 2012 NgoLwesihlanu, Septemba 26, 2014 Douglas Karr
Umlingane uDave Morse we-Delta Faucet udlulise amazwi okuvuyisana nam namhlanje ngokwenza uluhlu lweeNgcali ezili-18 zeNtengiso eziPhakathi kwi-Whitepaper kaMarketo: Yandisa ifuthe lakho: Ungaziphindaphinda njani iiNkqubo zeNtengiso. Yintoni iNgcali yokuThengisa engenayo? Intengiso engenayo ibhekisa kwimisebenzi yentengiso ezisa iindwendwe, endaweni yokuba abathengisi baphume bayokufumana ingqalelo. Ukuthengisa ngaphakathi kungenisa ingqalelo kubathengi, kuyenza
Ukusebenziseka yinzululwazi, kodwa ezinye zazo ziqhelekile. Ndikhumbula ndinempikiswano eninzi nabantu malunga nokusebenziseka xa ndisebenza njengoMphathi weMveliso. Kukho izinto ezithile ezinikiweyo- ezinje ngendlela amehlo alandela ngayo isikrini (ukusuka ekhohlo ukuya ekunene), indlela abalekela ngayo ezantsi, kunye nendlela abalindele ngayo isenzo emazantsi ekunene. Akukho nzululwazi ininzi ibandakanyekayo, ezinye zezi zinto zombini ziziqhelo, kwaye ezinye zazo
Sukuba yiPunk, yiba yiHunk kwaye Chunk Umxholo wakho
NgeCawa, ngo-Epreli 22, 2007 NgoMgqibelo, nge-20 kaFebruwari ngo-2016 Douglas Karr
Ukunuka, uxolo! Ndiyathemba ukuba ifumene ingqwalaselo. UDan Zarrella unesithuba esihle kakhulu sokucima umxholo wakho. Ndiphinda ezinye zeengcebiso zakhe kwaye ndaphosa eyam encinci. Chunkless: Kubekho isixa esikhulu kophando malunga nokuziphatha kwabatyeleli bewebhu kunye nendlela abafunda ngayo kwaye baguqule amanqaku kunye namaphepha kwisikhangeli sewebhu. Indlela eqhelekileyo yeendwendwe zewebhu kukufunda idatha okanye iintloko kwii-chunks kunokufunda